Multi-Functional Production-dalana - China Shijiazhuang Zhongtai Sodina
Io karazana orinasa afaka mamokatra manodidina sodina joro sy mahitsizoro sodina ary ny sasany avy abroach hatsiaka nanakodia fizarana vy
1) ZTF Izaho Jehovah no manao Teknolojia nampiasaina Round amin'ny famokarana Sodina
2) mivantana Square Izaho Jehovah no manao Teknolojia amin'ny famokarana Square & mahitsizoro tarafin'ny Sodina
3) Alaharo eto ny ampahany amin'ny hatsiaka Abroach nanakodia Fizarana Steel
1) ZTF Izaho Jehovah no manao Teknolojia nampiasaina tamin'ny Produc tra Round Sodina
√ Aza mila miova lasitra ao amin'ny fizarana rava, fahavaratra ny 60% vola ny rollers
√ Roller fiovan'ny fotoana dia hokapaina indrindra, rava fizarana dia tsy mila miova lasitra ary manitsy fotsiny dia ok. Ary afaka manapaka-midina mpamokatra fotoana.
√ Release hamafin'ny asa.
√ Roll namorona ny teknolojia, fakan-tahaka toa dia tsy mitovy sy propitious ho X70, N80 esory vy.
√ esory ny vy dia nanolana sy beared kokoa ara-drariny, mba hampihenana ny RUB eo amin'ny esory sy ny-roller, ary koa mampihena ny fandaniam-poana ny-roller.
√ Mora kokoa hamerenana amin'ny laoniny sy hanitsiana ny-roller.
2) mivantana Square fiforonana Techn ology In Produc tra Square & mahitsizoro tarafin'ny Sodina
√ Ampitahao amin'ny manodidina ho efamira & mahitsi- namorona lalana, izany no tsara ho amin'ny endrika an-tsisin'ny amin'ny hazo fijaliana fizarana, azo lazaina, semi-savaivony ny anaty Arc dia kely, ary ny molony dia fisaka, dia ny fomba fihevitra tsy tapaka.
√ ny andalana rehetra entana dia ambany, indrindra fa ny sizing faritra.
√ ny sakany esory ny vy dia kely ny 2.4-3% noho ny manodidina an-kianja & mahitsi-, dia mety afa-tsy ny lanin'ny fitaovana ny manta.
√ io hifanaraka ny multi-teboka hiondrika lalana, tsy ny hery sy ny lafiny axial abrasion, hampihenana ny fananganana dingana hahazoana antoka raha ny toetra, mandritra izany dia mampihena ny hery sy ny wastage-roller abrasion.
√ io hifanaraka ny mitambatra karazana-roller amin'ny ankamaroan'ny ny fitoeran-tavin, dia hahatsapa fa iray hametraka ny-roller dia afaka mamokatra am-polony ny efamira & mahitsi- sodina amin'ny hafa famaritana, dia mihena ny fivarotana ny-roller, ambany ny vidiny tokony ho 80% amin'ny-roller, hifady hanina ny bankroll turnover, fohy ny fotoana nanaovana vokatra vaovao iray.
Simple abroach mangatsiaka nanakodia fizarana vy toy ny mivantana namorona fantsona vy, C miendrika vy, Z vy miendrika.
Fanamarihana: Afaka mamaritra sodina sy mpanamboatra milina fanaovana araka ny mpanjifa 'fepetra.
Previous: Abroach hatsiaka nanakodia Fizarana Steel Production-dalana,
Next: Hafainganam-pandeha avo Sodina Mill
Automatic welded Steel Sodina
Mangatsiaka Roll Izaho Jehovah no manao Machine Fa welded sodina
Frequency welded sodina-dalana
High Frequency Sodina Welding Machine
Sodina Welding Manao Machine
Stainless Steel sodina Production Li Ne
Steel Sodina Manao Machine
Steel Sodina Production-dalana
Steel Sodina Welding-dalana,
Steel Pipes fanaovana Machine
Tube Ny fanaovantsika Machine
Weld Sodina Roll Izaho Jehovah no manao Machine
welded Sodina Fitaovana
welded Sodina Manao Equipment
welded Sodina Manao Machine
welded Sodina Production-dalana
Welding fiforonana Machine
Welding Sodina Machine
Welding sodina Making Machine